Akukho sithuba sodwa: U-Abu Dhabi uvulela abahambi abagonyelwe ngokupheleleyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlangayo ze-UAE » Akukho sithuba sodwa: U-Abu Dhabi uvulela abahambi abagonyelwe ngokupheleleyo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Safety • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE • Iindaba ezahlukeneyo
Eli linyathelo elikhulu eliya phambili njengoko i-UAE ilungiselela ukusingatha i-EXPO 2020, iFomula 1 i-Etihad Airways i-Abu Dhabi Grand Prix kunye neminye iminyhadala yehlabathi kwiinyanga ezizayo.
U-Abu Dhabi ususa iimfuno zokuvalelwa yedwa kubakhenkethi abagonywe ngokupheleleyo.
U-Abu Dhabi ulindele ukunyuka okukhulu kwimfuno yohambo lokuya emirate.
I-Etihad Airways ilungiselele ukonyusa uhambo oluya e-Abu Dhabi.
Urhulumente wase-Abu Dhabi ubhengeze ukushenxiswa kwesidingo sokwahlukaniswa kwabo bonke abahambi abagonyiweyo abafika kuphuma phesheya.
I-Etihad Airways, inqwelomoya yenqwelomoya yesizwe ye-UAE, ikulungele ukonyusa uhambo lokuya nokubuya e-Abu Dhabi kulandela isibhengezo sikarhulumente.
Abahambi abagonywe ngokupheleleyo (kunye namayeza okugonya avunywe nguMbutho wezeMpilo weHlabathi) banokufika bevela kuzo zonke iindawo zehlabathi ngaphandle kwesidingo sokubekwa bodwa. Bonke abahambi baya kufuna uvavanyo lwe-PCR ngaphakathi kweeyure ezingama-48 zokumka, uvavanyo xa befika kwaye baphinde baphinde bavavanye kwiintsuku ezithile ngokuxhomekeke kwilizwe abalihambileyo. Abahambi abangacacanga, nangona kunjalo, kufuneka balandele imigaqo ngokokuya apho bafika khona.
UTony Douglas, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba sokuLawula, Etihad, wathi: “Iindaba zenziwe ngexesha elifanelekileyo lokuqalisa ukwamkela umhlaba Abu Dhabi. Silindele ukunyuka okukhulu kwemfuno kubakhenkethi nakwindwendwe zabahlobo kunye nezihlobo ezivela kwihlabathi liphela. Oku kuyakunika abahlali be-UAE ubhetyebhetye ngakumbi kunye noxolo lwengqondo xa usiya kwilizwe jikelele.
“I-emirate ihambise enye yezona nkqubo zempilo zikarhulumente zibalaseleyo ukukhusela abemi ngezinga eliphezulu kakhulu lokugonya, kunye nezisombululo eziqhutywa zeteknoloji ezifana ne-Al Hosn app ukuqinisekisa ukhuseleko lwabahlali kunye neendwendwe.
“Eli linyathelo elikhulu eliya phambili njengoko i-UAE ilungiselela ukusingatha i-EXPO 2020, iFormula 1 ye-Etihad Airways i-Abu Dhabi Grand Prix kunye neminye iminyhadala yehlabathi kwiinyanga ezizayo.
“I-Etihad kungoku nje isebenza kwiindawo ezingama-65 zokukhwela enye yezona zithuthi zincinci kwaye zizinzileyo ehlabathini. Sijonge ukwamkela iindwendwe zethu e-Abu Dhabi kunye ne-Etihad ukuze sizonwabele kule ndawo ikumgangatho ophakamileyo- isixeko esikhulu nesinebhongo lokuzibiza ngokuba likhaya lethu. ”
Ukubhabha nge-Etihad kuxhaswa yinkqubo ye-Etihad Wellness ethe yaziswa ukunceda ukunciphisa umda wokusasazeka kwe-COVID-19. I-Etihad yayiyinqwelomoya yokuqala emhlabeni ukugonya ngokupheleleyo abasebenzi bayo ebhodini. I-Etihad ikwafuna i-100% yabakhweli bayo ukubonisa uvavanyo olubi lwe-PCR ngaphambi kokuba bakhwele ukukhusela imeko yokukhanya, eyaziwayo ngoku ukuba yenye yezona zibalaseleyo emhlabeni.
I-airline iphumeze inkqubo ebanzi yococeko kunye nokuba sempilweni kwaye isebenza kweyona migangatho iphezulu yococeko kuyo yonke indawo yohambo lwabathengi. Oku kubandakanya ukutya, inqwelo moya kunye nekhabhathi yokucoca okunzulu, ukungena, ukuhlolwa kwezempilo, ukukhwela ehostele, ukukhanya, ukusebenzisana kwabasebenzi, inkonzo yokutya, ukwehla kunye nokuhamba komhlaba, phakathi kwabanye.